ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: September 2009
ကိုချစ်ဖေခုတလောဗျာ ကိစ္စတွေများတယ် ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ပဲလေ.“များမှာပေါ့.
ကိုချစ်ဖေကလည်း” လို့ ပြောလာရင်လည်းခံရမှာပဲလေ လူက ခုအလုပ်မရှိဘုတ်မရှိ ၁၀၉
၁၁၀ ပေါ့ ဒါပေမဲ့ဗျာ စိတ်တွေကမအားဘူးဗျာ ကျမ်းမာရေးကလည်းကိစ္စပြန်ရှိလာချင်တယ်
ကိုချစ်ဖေက ကိစ္စမရှိချင်ယောင်ဆောင်ရတာပါဗျာ ဘာတတ်နိုင်မလဲဗျာ.ဒီလိုပေါ့..။
ကိုချစ်ဖေကိုမသနားကြပါနဲ့ဗျာ.ကိုချစ်ဖေနေတတ်နေပါပြီ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကိုချစ်ဖေကိုသနား
ကြင်နာချစ်ခင်သောသူများကိုလည်း ကိုချစ်ဖေက ချစ်ပါတယ် ကိုချစ်ဖေကိုယ်တိုင်လည်းပျော်
ကိုယ့်ကိုအသေသတ်မဲ့ကြိုးကိုတောင် “ခင်ဗျားတို့ကြိုးကခိုင်ရဲ့လားဗျာ ကြိုးကသေးနေတယ်
တော်ကြာကျူပ်မသေမှဖြင့် ခိုင်အောင်လုပ် ခိုင်အောင်လုပ်”လို့နောက်ပြီးမှသေသွားချင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေဖြစ်အောင်နေထိုင်ရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံပြောကောင်းတဲ့ သူ
ငယ်ချင်းအကို ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်လေးတပုဒ်ကို သတိယလာပြီးပြုံးဖြစ်သေးတယ်.ကျနော့်လိုမျိူး
ဗျာ..တခါတုန်းက တရုတ်ပြည်မကြီးကတရုတ်လူမျိူးတွေက ရာသီဥတု အစားအသောက်
နားရှိလိုက်ရတယ်.ခုတော့ ကျနော်တို့က ကလဲ့စားပြန်ချေတဲ့အနေနဲ့ တရုတ်တွေနိုင်ငံတွင်မ
က မြန်မာပြည်ကလွဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုအကုန်ပြန်အလုပ်ထွက်လုပ်နေပါတယ်ဗျာ..ဘယ်သူ့
တာပေါ့ ကျနော်ပြောချင်တာ တရုတ်လူမျိူးသမ္မာန်ခတ်တဲ့အဖိုးတယောက်အကြောင်းပါ ဟော
လုပ်ပြန်ပြီ တရုတ်လူမျိူးသမ္မာန်ခတ်တဲ့အဖိုးကြီးတဲ့ ခုခေတ်ကလေးတွေကပြောတော့မယ် ဦး
ချစ်ဖေကြီးကတော့မှားပြန်ပြီပေါ့ ခုခေတ်မှာမြို့လည်ခေါင်နေရာတိုင်းမှာ အဖိုးတန်ရပ်ကွက်ထဲ
မှာကုမ္မဏီပိုင်ရှင်တွေ လုပ်ငန်းကြီးပိုင်ဆိုင်သူတွေ ကုန်ပွဲရုံကြီးတွေ အကုန်လုံး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့
ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကို ပိုင်တာက တရုတ်လူမျိူးတွေ ပညာတတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေ
ထဲမှာရော တခါတုန်းက နိုင်ငံခြားသားတွေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ကြားခွင့်ပိတ်ပင်
ထားခဲ့လို့သာ နို့မို့ အမှတ်ကောင်းမှတက်ခွင့်ရတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာတောင်ရှိပါ့မလားပဲဗျာ
အဲ့လိုပြောတာ ဘယ်လူမျိူးဘက်ကမှလိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော် တကယ့်အရှိပါနော်ခု
ဟင်္သတနဲ့သာရဝေါကို ကူးတဲ့ကူးတို့သမ္မာန်ကို ခတ်တဲ့သူပေါ့ဗျာ ကူးတို့သမားပေါ့ ခုခေတ်
လိုခေတ်မှီဖွံဖြိူးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှမဖြစ်သေးတဲ့ဟာလေ ဟင်္သတနဲ့သာရဝေါကို ဧရာဝတီ
မြစ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတဖက်ကမ်းကနေ တဖက်ကမ်းအရောက်ခတ်ရတာလေ သာရဝေါကနေ
ရန်ကုန်အထိ ရထာားလမ်းပေါက်တယ်လေဗျာ ဒီတော့ ရေကြည်အသုတ်ပုသိမ်ဖက်က မြန်
အောင်ကြံခင်းဖက်က လူတွေကဟင်္သတကိုရထားနဲ့လာ တဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်
ကိုသွားလို့ရတယ်လေ ဒီတော့အဲ့ဒီခေတ်က သမ္မာန်ကူးတို့နဲ့ကူးကြရတယ်တဲ့။
အဲ့ဒါ မိုးတွင်းကာလမှာဆို ဧရာဝတီမြစ်က သောင်တွေရေမြှုတ်ပြီး မြစ်ပြင်ကြီးက အကျယ်ကြီး
ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ လေလာရင်လှိုင်းကလည်းကြီးတာပေါ့ အဲ့ဒီလိုအခါမျိူးမှာ လှေသမ္မာန်မထွက်
ခင်ကတည်းက လှေကိုကုန်ပစ္စည်းလူအစစ ပြင်ဆင်ရပါတယ် ကိုယ်တင်မဲ့လူ ကုန်ပစ္စည်းအ
လေးချိန်ကို တွက်ပြီးတော့တင်ရတာပါ တနေ့တော့အဲလို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ရထားဆိုက်ချိန်
လည်းဖြစ် မြစ်ကလည်း မိုးလေးညို့လာတာနဲ့ လှိုင်းကကြီးလာတော့ ခရီးသည်တွေက မြစ်ကို
ဖြတ်မဲ့အချိန်မှာ စိုးရိမ်စိတ်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့ ကိုချစ်ဖေလည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သားဆို
လူတွေက မြစ်ဖြတ်မဲ့ကူးတို့သမားအဖိုးကြီးကိုမေးတာပေါ့ “ဆရာကြီးမိုးရိပ်လေရိပ်ရှိနေတယ်
ဆရာကြီးလှေနဲ့ကူးလို့ဖြစ်ပါ့မလား ကုန်တွေလည်းပါသေးတယ် ခုတင်ထားတဲ့လူနဲ့ကုန်နဲ့
တင်တော်တော်များနေပြီ ”ဆိုတော့ သူကပြန်ပြောပါတယ် “ဖြစ်ပါတယ် ၀ ငယ်ငယ်လေးထဲ
က ဒီကူးတို့ကို ခတ်လာတာ ၀မှာအီတွေ့အီကြုံတွေ အများကြီးရှိ်ပါတယ် ကိတ်ချမရှိပါဘူး
ကိတ်ချမရှိပါဘူး” တက်ပေါ့ တယောက်တက်ပြီးလည်း သူကမထွက်သေးဘူး လူတွေကိုထပ်
ခေါ်နေသေးတယ် အဲ့ဒီတော့သူက ထပ်ပြောတယ်“ကိတ်ချမရှိသေးဘူး ရပါတယ်”တက်ပါ
တက်ပါနဲ့ ခေါ်တာပေါ့ ခရီးသည်တွေကလည်း စိုးရိမ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အတွေ့အကြုံတွေများတဲ့
ထွက်လာတာပေါ့ အားလုံးလဲအဆင်ပြေပါတယ် အဲ့လိုခတ်လာရင်းနဲ့ရေလည်ခေါင်ရောက်
ခါနီးလောက်မှာ မိုးနဲ့လေနဲ့ကရွာလာပါလေကော လှိုင်းကလည်းပိုကြီးလာတာပေါ့.အဲ့ဒီ
တော့ခရီးသည်တွေက စိတ်ပူလာလို့ဆရာကြီးဖြစ်ပါ့မလားခုနေပြန်လှည့်ရင် မှီသေးတယ်
ပြန်လှည့်မလားမေးတာပေါ့ ကူးတို့ဆရာကြီးကလည်း“မီကြောက်ပါနဲ့ ဖြစ်ပါတယ် ကိတ်ချ
မရှိပါဘူး ၀အီတွေ့အီကြုံအများကြီးရှိပါတယ် ဆရာကီးတို့မသိလို့ပါ” လို့ပြန်ပြောတယ် တ
ဖြေးဖြေးခတ်လာလိုက်တာ ရေလည်ခေါင်ရောက်ရောဗျာ လှိုင်းတောထဲမှာ လှေလေးကလူး
လိမ့်နေတာပေါ့ ရေ ၀ိုင်းကူးပက်တဲ့သူကလည်းပက်ပေါ့ နောက်တော့လှေလေးက ရေ၀င်
တာနဲ့မြှုတ်လုလုဖြစ်လာရော.အဲ့ဒီတော့မှ “အား မိတ်ဆွေတို့ ကျနော်ပြောမယ် ကိတ်ချရှိလာ
ပြီ ကိတ်ချရှိလာပြီ နောက်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့သူကစပြီးမြစ်ထဲကို ခုန်ဆင်းပေးပါတဲ့” “ကိတ်ချရှိ
လာပြီ ကိတ်ချရှိလာပြီ” လို့ပြောသတဲ့ အဲ့ဒီအကိုက ကျနော်ကိုပြောပြတာပါ ကျနော်က
လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ လောဘသမားတွေ အတ္တသမားတွေနဲ့ နောက်ကျောကိုဓါးနဲ့ထိုးချင်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါရေလည်ခေါင်ရောက်မှ ကိစ္စရှိလာပြီး
ကိစ္စရှိလာတာတွေ လက်တွေ့မှာလည်း ခံစားရတာတွေ တွေ့တိုင်း ပုံပြောပြတဲ့အကို ကိုသတိ
ရလာပါတယ်.ခုလည်းအကိုရေ ကျနော့်မှာ ကိတ်ချတွေရှိလာပြီ.လို့သာပြောပြချင်ရင်း ကျန်
တဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလည်း နောက်ကို ရေလည်ခေါင်ကျမှ ကိတ်ချရှိမလာကြဖို့ ဆင်
ချင်နိုင်ရန် ပုံပြင်လေးကိုဖေါက်သည်ချပါကြောင်း။ ။
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 5:38 PM , Links to this post ,2comments
ကိုချစ်ဖေလေ..မှားပြန်ပြီဗျာ မှားတော့လည်းအတွေ့အကြုံကရပြန်ရော (အတွေ့အကြုံဖတ်
လိုက်ပါဗျား..ဟီး) ဘယ်လိုမှားပြီး ဘယ်လောက်မှားတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ ကို
ဖတ်ပြီးရင် မရယ်နဲ့နော် ဂျိူကာကရယ်စရာလေးတွေ ရေးနိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ဘာရေးရမလဲမ
သိဘူးဖြစ်နေတာပါ အဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်အပျက်လေးကိုတွေးမိပြီး တယောက်ထဲရီနေရလို့ဗျာ
အခြားသူတွေလည်း ရီရအောင်လို့ဗျာ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ခွင့်တောင်းစရာမလိုတော့အောင်ရင်းနှီးသူ ချစ်ခင်ရတဲ့သူမို့ နောက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ
လဲထိခိုက်စရာမလိုဘူးထင်မိလို့ သူနဲ့ချက်ထားတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်
ပါဦးဗျာ.ဟားဟား..me ဆိုတာက ကိုချစ်ဖေပေါ့ဗျာ.clearstalker86 တော့..ဟဲဟဲ.ဘယ်သူ
Chat with clearstalker86@gmail.com Reply |clearstalker86@gmail.com to me
show details Sep 22 (3 days ago)
11:53 AM me: အသည်းခွဲခံချင်တယ်ဆိုပြီး..
clearstalker86: bro ka lal
11:54 AM me: အော.မှားပြန်ပြီ
clearstalker86: bro ka lal so bro ka lal naw
bar ko mhar tar lal bro ya`
11:55 AM me: အော်.မှားပြန်ပြီ
mhar pyan p lar
11:56 AM ခု ညီမက ဘယ်သူပါလဲ.ဗျာ
11:57 AM clearstalker86: byar
bal nyima lal
11:58 AM clearstalker86: myanmar ka pop bro ya`
clearstalker86: hint inn ma hote bu bro
11:59 AM me: အကောင့်တွေကဆင်တော့မှား
12:00 PM clearstalker86: byar
MOS mhar pa` thi tar lay bro ka lal
forget twar p lar
clearstalker86: lamin lay bro ya`
12:01 PM သေတော့မှာပဲ
clearstalker86: ko moe sal ka tot naw
lamin pa` har ko
12:02 PM ဟိုနေ့က အသည်းခွဲခံချင်တယ်လို့ ကော်မန့်ပေးသွားတယ်လေ
ae` dar ka song sar thar par bro ya`
12:03 PM မှားပြီးရင်းမှား
clearstalker86: ko moe sal kyi ka tot
bar tway phit nay lal ma thi par bu
12:04 PM me: ဟားဟား
12:05 PM clearstalker86: hon hon
bar tway lote nay lal ko moesal ya`
12:06 PM မနက်စောစော စာထရိုက်တယ်ဗျာ
me: ခု အပြင်ကပြန်လာတာပါဗျာ..
clearstalker86: exercise twar lote tar larapyin mhar
12:07 PM clearstalker86: hote
kg pa byar
12:08 PM clearstalker86: ommm
အန်တီမသောင်းညွန့်က bro chitthu lar
12:09 PM me: ဟုတ်ပဗျာ
12:10 PM clearstalker86: hote kg par byarrr
a yan chit tar pa` lar chithu ko
me: ကိုချစ်ဖေက တယောက်ဆိုတယောက် ပိတောက်ဆိုပိတောက်လေ..ဟီး
12:11 PM အားလုံးကိုအဲ့လိုပဲပြောတယ်
pa dout chout mha nout ta york
12:13 PM me: :D
12:14 PM clearstalker86: hehe
hote par p byar
me: နောက်တာနော်..တကယ်က အရမ်းအရမ်းကိုချစ်တတ်လို့
12:15 PM clearstalker86: hote
12:16 PM ae`
akuadi mhar bal time shi p lal
me: ၁၂း၁၆ နေ့လည်
nay lal lar
12:17 PM awww
hote thar pa`
US na` ka
kya naw tot time na` ka
me: တမြို့တနယ်စီမှာလေ.ပိတောက်နဲ့ချယ်ရီပမာ ပေါ့..
12:18 PM clearstalker86: hehe
hote pa hote pa bro yay
ခုလိုချက်ဖြစ်သွားတာ clearstalker86 မေးအကောင့်ဆိုတာ ကျနော့်ညီငယ်လိုချစ်ခင်ရတဲ့သူ
လေးပါ သူ့မေးမက်ဆေခ်ျမှာ ရေးထားတာကိုသွားနောက်လို့ ကျနော့်ကိုအသည်းခွဲခံချင်တယ်
အကိုရှာပေးပါလို့ လာနောက်သွားလို့ သူကိုလိုင်းပေါ်မှာပြန်တွေ့လို့ ကျနော်ကသွားနောက်တာ
ခက်တာက အင်္ဂလ်ိပ်အက္ခရာစီနဲ့စတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့်မှာများတယ်ဗျာ မမှားအောင်
ကျနော်မှတ်ထားရတာ အဲ့ဒီနေ့ကမှားစရာမဟုတ်တဲ့ အမြဲတမ်းလဲတွေ့နေတဲ့သူ့ကိုမှားဖြစ်
အောင်ကိုမှားလိုက်တာ ယောက်ကျားလေး မိန်းကလေး ဘယ်နေရာမှာနေတယ် ဘယ်နေရာ
ကသိတယ် ဘယ်သူ့နဲ့ပိုခင်တယ် ဘယ်သူ့ရဲ့ဒုတိယမေးလ်အကောင့်ကဘယ်လို နောက်တချိူ့က
ဆင်တူရိုးမှားဗျာ.ကျနော်လည်းမှတ်တော့မှတ်တာပေါ့ နောက်နာမည်ကတမျိူး မေးနာမည်က
တမျိူးဆိုတော့ အကုန်မမှတ်မိတော့ပါ တချိူ့ကတခါတလေမှလာတာ တချိူ့ကအမြဲ အဲ့လိုလဲ
ရှိသေးတော့ ကျနော်ကရောသွားတာ(သူရာရေ အဲ့ဒီလိုမှားလို့ အသည်းကွဲတာလည်းအကြိမ်
ကြိမ် သူပြောတာ.ဟီးမဖွပါဘူး အကိုက စကားကြုံလို့)
အဲ့လို ဒါငါ့သူငယ်ချင်းပါ လမင်း ပါဆိုပြီးနောက်လိုက်တာ သူကလည်း ကိုချစ်ဖေနောက်မှန်းသိ
လို့ ပြန်ပြောတာကို လူမှားနေပြီလို့ကိုချစ်ဖေရွှေဥာဏ်တော်က ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်
.အဲ့ဒါနဲ့အများပြည်သူသိတဲ့အတိုင်း.ဖြစ်သွားတာ.ဗျာ.ကိုချစ်ဖေ ကိုချစ်ဖေ….နောက်သူက အဲ့ဒီ
နေ့က သူ့ကောင်မလေးဓါတ်ပုံလည်း တင်ထားတယ်ဗျာ.နောက် ommm,ommm,hon.. နဲ့သူက
ပြောနေတော့ မိန်းကလေးတွေပြောတတ်တဲ့ hont တို့ hint တို့လိုထင်ပြီး အဲ့ဒါဇဝေဇ၀ါဖြစ်
သွားတာလည်းပါတယ်.(အမြဲတမ်းသူ့ပုံပဲမြင်နေကျဗျ ခေါင်းစွပ်ကြီးနဲ့ဘေးတိုက်ကြီးလေ သိ
ိတယ်မှလား အဲ့ဒီနေ့ကျမှ သူကကောင်မလေးလှလှပုံလေးတင်ထားသေးတယ်)
ဟိုက်..ငါလူမှားပြီလို့ထင်သွားတယ် လမင်းကယောက်ကျားလေးမှ ကျားကျားယားယား
ယောက်ကျားလေး ကိုချစ်ဖေက သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတယောက်ယောက်မှတ်ပြီးအားနာ
သွားတာ သူကလည်းသိပါတယ် သူ့ကိုမှားနေပြီဆိုတာ “ကိုလမင်းကိုသိလား”ဆိုတော့“သိ
(နောက်နောင်ကိုလည်း ကိုချစ်ဖေအဲ့လိုများမှားခဲ့ရင် ခွေးလွှတ်လိုက်ပါလို့-အဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 7:42 PM , Links to this post , 1 comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 10:16 PM , Links to this post ,2comments
ကိုချစ်ဖေ နဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်း
ကိုချစ်ဖေနဲ့ဆေးရုံ ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ တမျိူးမထင်ကြနဲ့နော် ကိုချစ်ဖေသောက်ဖူးခဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဘူးခဲ့ ထိုးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆေးရုံ
ဆေးခန်း ဆေးဝါး တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဆေးရုံနဲ့ထိတွေဆက်ဆံခဲ့ရ ခံစားရတာတွေကို (သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်အကြောင်း
လည်းပါပေါ့) စဉ်းစားမိသလောက် အကုန်ပြန်ရေးချင်တာပါ အားလုံးသူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောတဲ့သဘောပါ.
မကြာသေးခင်ကပဲ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိဆေးရုံတက်လိုက်ရသေးတော့ ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တာ
တွေကို ငယ်ငယ်လေးထဲကစပြီးပြောချင်နေလို့.စကားများလိုက်တာလို့ပြောကြမလားပဲ ဟီး တကယ်ကလည်းများပါတယ်
ကိုချစ်ဖေတော့ဗျာ ဘလော့ကြီးကိုရထဲက မျောက်အုံးသီးရသလိုဖြစ်နေတာ ခွဲလည်းမစားတတ် ခွဲပြီးမှစားရမယ်ဆိုတာလည်း
သိတော့ အခက်တွေ့သလို တချိူ့ဟာတွေကိုမလုပ်တတ် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့သူကအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့ကိုချစ်ဖေ
မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရေးချင်တိုင်း သွားပြီးပူဆာလို့ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာ တချိူ့ဟာတွေ အဆင်မပြေတာတွေရှိရင်သည်းခံပေးကြပါဦးနော်
ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုချစ်ဖေက ကွန်ပြူတာဆိုတာ စာရိုက်လို့ရတဲ့ တယ်လီဗေးရှင်းအသေးစားလေးလို့ပဲထင်တာမျက်နှာဖြူတေ
ွရဲ့စာလည်းသိပ်မတတ်တော့ သူများလိုစာဖတ်ပြီးလည်း မလုပ်တတ်တော့ ခွေးလေးကိုရေထဲကိုပစ်ချလိုက်သလို ရေထဲမှာပေါ်အောင်သာ
ကူးတတ်တာလေ အဲပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ကိုချစ်ဖေလည်း မျောက်ဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီ။
ကဲပြောတော့မယ် စပြီ စပြီဆိုတော့ ဘယ်ကစရပါလိမ့်(ဟော.ပေရှည်ပြန်ပြီ)ဒီလိုဗျာ ပထမဆုံးဆေးရုံနဲ့ကိုချစ်ဖေပတ်သက်တာ
ပြောရရင် ကိုချစ်ဖေကို ကိုချစ်ဖေ မေမေက မြစ်ဝကျွမ်း
ပေါ်ရဲ့တောမြို့လေးတမြို့ရဲ့ဆေးရုံမှာ မွေးတာလေ ကိုချစ်ဖေကိုမွေးတော့ ကိုချစ်ဖေ ဖေဖေက အလုပ်နဲ့ခရီးထွက်နေရတယ်တဲ့ ကိုချစ်ဖေမေမေက
မွေးဖွားဖို့ ဗိုက်နာလာတော့ လမ်းထိပ်က အသိဆိုက်ကားကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံကို သူ့ဘာသာသွားတာတဲ့ နောက်ကနေ အဖွားတို့ကသိတော့
မှဆေးရုံကိုလိုက်လာရတာတဲ့ အမေကအဲ့လိုမျိူး အဲ့ဒီနေု့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် စနေနေ့မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၃၅ မီးနစ်မှာမှာ ကိုချစ်ဖေကို မွေးတာ
တဲ့ ခုနှစ်ကတော့ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ပေါ့ ကိုချစ်ဖေဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ စပတ်သက်ရတာ အမေ ကိုချစ်ဖေကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားထဲက ဆေးခန်း
ပြတာတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲနော်.ကိုချစ်ဖေအဖေကသားလေးလိုချင်တာတဲ့ သားလေးမွေးတော့တော်တော်ပျော်သွားတယ်ဆိုပဲ.
ဒီမှာတင် အဖေကိုအဖိုးက ခေါ်ပြောတော့တာတဲ့ ကိုချစ်ဖေကိုမေမေကမွေးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်း ဖေဖေကရောက်လာ ရောက်လာ
ရောက်လာတာနဲ့ အဖိုးက “တင်ဝင်းကို သူသားကိုကြည့်ပြီးရင် ငါ့ဆီလွှတ်လိုက်”လို့မှာထားတာ မှာထားတာဆိုတော့ အဖေကသွားတွေ့ရ
တာပေါ့ အလုပ်လုပ်တာကလည်း အဖိုးသင်္ဘောမှာစာရေးလေးလုပ်ရတာဆိုတော့ လုပ်ငန်းအရသတင်းပို့ရသေးတာဆိုတော့ ဒါအထူးခေါ်
တာပဲပေါ့ အဖေကသွားတာပေါ့ ကြားထဲမှာဖြတ်ပြောရဦးမယ် အဖေက အဖိုးရဲ့သားအကြီးဆုံးလေ အဖိုးကတရုတ်လူမျိးကပြား(တရုတ်တ
မတ်သား) အဖိုးရဲ့အဖေက တရုတ်ဗမာကပြား(တရုတ်ငါးမူးသား)ကုန်စုံဆိုင်တရုတ်မျိူးရိုးဗျာဗမာပြည်မှာအခြေချနေထိုင်လာတာကြာပီ
လေ သွေးအရသာ တရုတ်ဗမာ တကယ်က တရုတ်နှစ်မကူးတဲ့တရုတ်တွေပေါ့ ထားပါတော့နော် အဖေသွားတွေ့တော့ အဖိုးက “ဟေ့
ကောင်တင်ဝင်း မင်းသားကိုတွေ့ပြီးပြီပေါ”့ လို့မေးတယ် “ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဘာနေ့သားလဲ စနေနေ့မွေးတာပါဖေဖေ အော်အော်.သားဦးစနေပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ အေးဒါဆို မင်းလိုပဲပေါ့ သားဦးစနေ အေး မင်းကိုပြန်နှိပ်စက်မဲ့ကောင် မွေးလာပြီလို့ သဘောထားတဲ့ ”
အဖေကမိန်းမ မရခင်ကဆိုးတယ်ဆိုပဲ စနေသားလဲစနေသားတဲ့(ဘာမှန်းလဲမသိပါဘူးဗျာ သားဦးစနေမွေးတွေကိုအဲ့လိုပြောကြတာပဲ)
အဖေက ကျနော့်ကိုစိတ်ဆိုးရင် အမြဲပြောတယ် “ငါ့ဖေဖေကငါ့ကို မင်းကိုမွေးပြီးခါစ ငါ့ကိုအဲ့လိုခေါ်ပြောတာ ခုငါမင်းနဲ့ကျမှ ဖေဖေပြောတာ
မှန်ပြီဆိုတာသိပြီတဲ့ အေး..မင်းလည်းငါ့ဝဋ်မလည်စေနဲ့” တဲ့ (ဟီး..၀ဋ်ကတော့အတော်လည်ချင်တာ ခုထိမလည်သေးဘူးကိုချစ်ဖေက က
လေးမှမရှိသေးတာ မိန်းမမရှိဘူးပြောရင် ကြော်ငြာဝင်တယ်အပြောခံရဦးမယ်) ကိုချစ်ဖေကလည်းသိပ်မဆိုးပါဘူး (၈) တန်းကျောင်းသား
ဘ၀မှာ ရန်ဖြစ်တာ ဒါးနဲ့ထိုးလို့တဲ့ ကျောင်းထုတ်ခံရတယ် နောက်ထပ်ပြောင်းတဲ့ကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုခံပြောလို့ ကျောင်းက တခါအထုတ်ခံရတယ် မိဘတွေ ဆရာတွေလိုက်အာမခံလို့ ဆယ်တန်းလေးဖြေခွင့်ရတာ လူက(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးဘူး ဆေး
လိပ် ထန်းရည် အရက် ဆေးခြောက် အကုန်တတ်နေပြီလေ သိပ်မဆိုးသေးဘူး.ဟဲ.အသက်(၂၅)ထဲဝင်ပြီးမကြာသေး ထောင်ဝင်စာလိုက်
တွေ့ရပြီ အဲ့ဒီတော့ကျနော်ကတော့ ကျနော်ကတော့အဖေ့ကို ဆိုးတယ်တခါမှမထင်ပါဘူး
တခုပဲ အဖိုးတို့က အဖေကိုမိန်းမပေးစားဖို့ စီစဉ်နေတုန်းမှာ အဖေက အဖွား
ကိုပြောပြီး အမေ့ကိုခိုးပြေးတာတဲ့ ဒါလည်းဆိုးတာမှမဟုတ်တာဗျာ အဖွားကစောင့်ခိုင်းတာပဲရှိတာ အဖိုးကအတော်စိတ်ဆိုးသတဲ့ဗျာ
ဘာလို့ဆိုတော့ အမေက ကရင်မလေးမို့လိုတဲ့ ကဲဗျာ အဖိုးက ဗမာမလေးနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးမလို့တဲ့ ကရင်မလေးကိုခိုးပြေးတော့ သူအစ
က သဘောမတူဘူးတဲ့ လူမျိူးမတူ စရိုက်မတူဘူးပေါ့ နောက်တောသူမလေးပေါ့ တကယ်ကအမေကရွာကနေ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရွာ
မှာနေရတာအခက်အခဲရှိတော့ မြို့ကိုတက်စာသင်ရင်း စစ်ကိုရှောင်ရတာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီမှာ အဖေနဲ့တွေ့တာ နောက်အမေက ၁၉ နှစ် အဖေ
က ၂၂ နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျကြတာ အမေက မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပိုးကရင် ကရင်လိုမွတ်နေအောင်ပြောတတ်တာ စကောကရင်လိုလည်းတတ်
တယ် အမေ့ရဲ့အဖေအဖိုးက တရုတ်ပြည်ကြီးကလာ အလုပ်လုပ်တဲ့ တရုတ်စစ်စစ် အဖွားက ကရင်စစ်စစ် အမေက ကရင်တရုတ်တ၀က်စီ
ကပြား ခက်တာက တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့အဖိုးကလည်း ငါမြန်မာပြည်မှာနေတော့မှာ ငါမြန်မာပဲဆိုပြီးနှစ်ပါမကူးတော့တာ ကရင်လိုသာ
အဖိုးက နည်းနည်းပါးပါးပြောတာ တရုတ်လိုဆိုလုံးဝမပြောတော့ဘူး အဲ့ဒီတော့အမေတို့က လူကသာကရင်တရုတ်ဗျာ ကရင်ယဉ်ကျေးမှု
သိကြတဲ့အတိုင်းဗျာ ဘီအိုင်အေပြန်အ၀င်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ကရင်ဗမာထိကရုန်းဖြစ်ကြသေးတာ ကရင်ရွာတွေကို ဗမာတွေက
မီးရှို့ဖျက် ဗမာရွာတွေကိုကရင်တွေကမီးရှို့ဖျက် နောက်မှမနည်းကြီးပြေလည်အောင် ဗိုလ်ချူပ်*တို့နဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးတို့နဲ့
ညှိပြီးပြေလည်အောင်လုပ်ခဲ့ကြရတာလေ အဲ့ဒီတော့ ကရင်ဗမာက သိပ်သွေးမစည်းသေးဘူး သွေးမစည်းဘူးသာဆိုတယ် အတူနေကြတာ
ဗျ ထိကရုန်းတွေဖြစ်ကြတော့ ဗမာရွာလေးတွေကိုကရင်တွေကစောင့်ရှောက် ကရင်ရွာလေးတွေကိုဗမာတွေကစောင့်ရှောက် အဲ့လိုနေခဲ့
ကြတာ တမြေထဲတနယ်ထဲ လယ်ထဲချောင်းထဲ ကစင်းတင်လုပ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ အဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးမှ လူမျိူး
ရေးအစွန်းရောက်သမားတွေမြှောက်ပင့် ၀ါဒဖြန့်တာကစပြီး ဗမာဆိုတာလူလည်လူရှုပ်တွေ ကရင်ဆိုတာငနုံတွေ ရိုင်းစိုင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်
လာတာဗျာအဲ့လို အမေက ငါငယ်ငယ်တုန်းက “ဗမာဆိုဘယ်တော့မှမယူဘူး”လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတဲ့ နောက်တော့ဗမာထဲမှာလဲ လူကောင်း
တွေလူရိုးတွေရှိတယ် ကရင်ထဲမှာလည်းဆိုးတဲ့သူတွေရှိတာပဲလို့ သူလက်ခံလာတာတဲ့ အမေကအထက်တန်းထိကျောင်းနေခဲ့ရလို့လည်း
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကိုချစ်ဖေကတော့ ကရင်ဗမာချစ်ကြည်ရေးမြို့လေးမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုချစ်ဖေ
တို့မြို့လေးမှာ ကျေးရွာအုပ်စု(၁၁၅)အုပ်စု မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်(၁၀)ရပ်ကွက်ရှိပါတယ် ကျေးရွာအုပ်စု(၆၅)အုပ်စုက ကရင်စကားပြောတဲ့ရွာတွေ
ပါ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက်က ကရင်လူမျိူးတွေနေထိုင်တာပါ ကရင်နဲ့ဗမာနဲ့ကျေးရွာတခုထဲ အပိုင်းလိုက်နေထိုင်ကြတာလဲရှိပါတယ်
ဗမာလူမျိူးတွေကချောင်းဝ ကရင်လူမျိူးတွေက ချောင်းဖျား အဲ့လိုနေထိုင်ကြတာလဲရှိပါတယ် အဲ့တာတွေကကျနော်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မြို့လေး ကျနော်က “ကရင်ဗမာချစ်ကြည်ရေးမြို့လေး” လို့နာမည်ပေးထားတယ် အထကကျောင်း(၆) ကျောင်းမှာ အထက(၂)အထက(၃)
အထက(၄) အလက(၃) အဲ့ဒီကျောင်းတွေက ကရင်လူမျိူးရပ်ကွက်တွေမှာ အထက(၆)မှာလည်းတ၀က်လောက် အဲ့လိုနေကြတာဗျာ
အဲ့ဒီလိုမြို့လေးမှာ ကိုချစ်ဖေဆေးရုံနဲ့စတင်ထိတွေ့ခဲ့ရတာ မွေးဖွားခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဗျာ.ဟဲဟဲပေရှည်သွားတာ.
ကိုချစ်ဖေတကယ်ပြောချင်တာက ကိုချစ်ဖေနဲ့ဆေးရုံ ဟီး.လျှောက်ပြောတာစုံနေတာပဲ.ကိုချစ်ဖေသူငယ်ချင်းတွေကတော့သိ
မယ် ကိုချစ်ဖေက အမြှောက်အပင့်တကယ်ကြိုက်တာ သူငယ်ချင်းတယောက် ကိုချစ်ဖေကို ဘလော့ရေးဖို့အားပေးတယ် နောက်တ
ယောက်ကလည်းစာရေးခိုင်းတယ် နောက်တော့နောက်တယောက်က တကယ်ထရေးတယ် အဲ့ဒီတော့ကိုချစ်ဖေလည်းရေးဖို့ဗျာစိတ်ထဲ
ပေါ်လာတာ ကိုချစ်ဖေရေးချင်ရာတွေကို ဖတ်မဲ့သူမရှိမှာ နောက်ဘယ်မဂ္ဂဇင်း ဘယ်စာစောင်ကမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တော့ ခုလို
ဘလော့မှာရေးချင်ရာရေးဖို့ စိတ်ကူးကလည်းပေါ်လာတာ နောက်ကိုယ်ချစ်ဖေကလည်း သူများတွေလိုရင်ပွင့်ချင်တာပေါ့နော်.နောက်ကူ
ညီပေးမဲ့သူကလည်း ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ “ကိုချစ်ဖေ၏မှတ်တမ်းကြီး” ပေါ်လာတာ မတော်တဆဖတ်မိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါတော့
ကိုချစ်ဖေကအဲ့လိုအမြှောက်နည်းနည်းမှမခံဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက ဆေးခန်းသွားရလို့ဆေးထိုးရရင် အပ်မြင်တာနဲ့အော်
နေတာမရပ်တော့ဘူးတဲ့ အဲ့ဒါမေမေက “ငါ့သားကမကြောက်ဘူး သတ္တိရှိတယ် ဗန္ဓုလသတ္တိ ဟောဆေးထိုးရင် တွန့်တောင်မတွန့်ဘူး နာ
လည်းမနာတတ်ဘူး” ဆို လုံးဝမငိုတော့ဘူးတဲ့အောင့်ခံတာတဲ့ ဗန္ဓုလသတ္တိဆိုတာလည်း ဘာမှန်းသိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ အဲ့လို ဟီး “လာ
မမြှောက်ကြနဲ့နော်” တကယ်က ကိုချစ်ဖေညီမလေးက ဘာမှမကြောက်တတ်တာ ကိုချစ်ဖေက အကုန်ကြောက်တတ်တယ် ငယ်ငယ်တုန်း
ကလူကြီးတွေသရဲအကြောင်းပြောရင် ကိုချစ်ဖေ၀ိုင်းထဲကို ၀င်တိုးထိုင်တာ ၀ိုင်းလည်ခေါင်ရောက်ရော အဲ့လိုသတ္တိ အပြင်ဖက်ကိုလည်း
မကြည့်ရဲတော့ဘူး ဒါကတော့ကိုချစ်ဖေ စမှတ်မိတဲ့ ဆေးခန်းသွားရတဲ့အတွေ့အကြုံပါ
နောက်ကိုချစ်ဖေ ဆေးရုံကိုသွားရတာကို မှတ်မိနေသေးတဲ့ နောက်အတွေ့အကြုံက ညီမလေးကိုမွေးတုန်းက မမွေးခင်က
လည်းနည်းနည်းမှတ်မိတယ် မေမေက “ညီလေးယူမလား ညီမလေးယူမလား”ဆို “ညီမလေး ညီမလေး” ပဲ တကယ်မွေးလာတော့လည်း
ညီမလေး၊ မေမေက ညီမလေးကိုမွေးဖို့ဆေးရုံသွားတော့ ကျနော်ကအိပ်ပျော်နေတာ အမကြီးဝမ်းကွဲတွေနဲ့ အဒေါ်နဲ့ထားခဲ့တာလေ နောက်
မနက် ကျနော်နိုးလာတော့မှ ညီမလေးမွေးကြောင်းပြောပြတာ ကျနော်ကိုလည်းဆေးရုံကိုခေါ်သွားတာ ဆေးရုံမှာညီမလေးကိုအနှီးလေး
နဲ့ထုတ်ထားတာ ပုခက်လေးထဲမှာအိပ်နေတာ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း အဖေကမရှိ ခရီးသွားနေတာပဲ ညီမလေးကို အဖေနဲ့တူတယ်ပြောတော့
ကျနော်ကကြည့်တာ ဘယ်လိုမှမကြည့်တတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ညီမလေးကိုတော့ ကြည့်ရတာကိုက်ချင်တယ် ချစ်တယ် မေမေဆေးရုံကဆင်း
လာတော့ညီမလေးကို အိမ်ရှေ့မှာ ပုခက်လေးနဲ့သိပ်ထားတာ မေမေမရှိတုန်း ညီမလေးပါးကို ကျနော်ကိုက်ဆွဲလိုက်တာ သူအော်ငိုတာပေါ့
မေမေလည်းပြေးလာတာပေါ့ မေမေက “သားညီမလေးကိုဘာလုပ်လိုက်တာလ”ဲတဲ့ “သားကိုက်ဆွဲလိုက်တာ သားချစ်လို့” လို့ပြောပြတော့ မေမေက မလုပ်ရဘူးသားနောက်မလုပ်နဲ့နော် ညီမလေးကနာတော့အော်တာပေါ့တဲ့ ကျနော့်အသက်က အဲ့ဒီတုန်းက (၃)နှစ်နဲ့ (၄)လ
ကျနော် အဲ့ဒီထဲက ညီမလေးနာအောင်မလုပ်တော့ဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကသူနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်း ကျနော်ပဲခံရတာ ညီမလေးကရိုက်
ပြီးပြေးရော အဲ့လို ဟီး အော်ကျနော်ပြောချင်တာက ညီမလေးကိုမေမေမွေးတော့ ဆေးရုံဆိုတာကို ပထမဆုံးအမှတ်ရစရာဖြစ်လာတာလေ
.နောက်ကိုချစ်ဖေ မှာပြောစရာတွေပေါ်လာတော့ ကိုချစ်ဖေရဲ့ညီမလေး အကြောင်းဆက်ပြောဦးမယ်.(ပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲ)
နောက်တော့ ဒုတိယအကြိမ်ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်ရတာပေါ်လာပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ မေမေဆေးရုံတက်ရတာပါပဲ ကျနော်(ရ )နှစ်သားမှာပေါ့ မေမေ့ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခွဲရတာပါ မေမေကို ကိုချစ်ဖေတို့ ဇာတိမြို့လေးက ဆေးရုံက တိုင်းဆေးရုံကြီးကို သွားပြခိုင်း
လို့ပါ ကျနော်ကငယ်တော့ ဘယ်သိပ်သိမလဲဗျာ နောက်တော့ ကြီးလာတော့မှသိတာပါ မေမေက သားအိမ်မှာကင်ဆာလိုဖြစ်တာတဲ့ အဲ့ဒါ
ဆေးရုံကဦးလို့တဲ့ သားအိမ်ကိုဗိုက်ခွဲပြီးဖြတ်ပစ်လိုက်ရတယ် မေမေကအဲ့ဒီတုန်းက အသက်(၂၇)နှစ် မေမေနဲ့ခွဲအိပ်ရတာ ပထမဦးဆုံး
ပါပဲ ကိုချစ်ဖေက အဖေရဲ့ညီမအဒေါ်အိမ်မှာသွားနေရတယ် ညီမလေးက အမေ့ရဲ့အမကြီးအဒေါ်အိမ်မှာသွားနေရတယ် ကိုချစ်ဖေအဖေက သင်္ဘောစာရေးဆိုတော့ အိမ်မှာ ကျနော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး အဲ့ဒီတော့အဒေါ်တွေက စောင့်ရှောက်ရတာပါ မေမေကို တလတ
ခါနှစ်ခါလောက်ပဲ ဆေးရုံကိုလိုက်တွေ့ရတယ် တခါတလေကျောင်းပိတ်ရက်ကြုံရင် အဒေါ်တွေသတင်းမေးသွားတဲ့အခါဆို ကျနော်နဲ့ညီမ
ကျနော်မှတ်မိနေတာကတော့ ဆေးရုံပေါ်မှာ ပြန်ခါနီးမေမေ့ကို မောင်နှမ(၂)ယောက်ကန်တော့ပြီးတိုင်း မေမေ့ကို အထူး
သဖြင့်မေမေ့မျက်လုံးလေးတွေကို သနားတာပါပဲ မေမေ့မျက်လုံးလေးတွေကို မေမေကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေးကျန်ခဲ့တာကို သနား
ပြီးကျနော်အမြဲငိုရတယ် ညီမလေးက စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တယ် မငိုဘူး ကျနော်ကိုတောင်လာချော့နေသေး နောက်မေမေပြောပြတာက သူအားတင်းထားရတာတဲ့ သူဝေဒနာပြင်းထန်လာတိုင်း ငါသေလို့မဖြစ်ဘူး ငါသေရင်သားနဲ့သမီးနဲ့အရွယ်မရောက်သေးပဲ အမေဆုံးရှုံး
သွားမယ်ခွဲနေကြရတော့မယ် အဖေကလည်းနောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာ သားတို့သမီးတို့ မိထွေးနဲ့နေရရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး ငါသေလို့
မဖြစ်ဘူးလို့ပဲသူအားတင်းထားရတယ်တဲ့ နောက်ပြီးကျနော်တို့မြို့ကို သင်္ဘောနဲ့လေးနာရီလောက်စီးပြီးပြန်လာရတိုင်း ညနေဖက်ဆိုတော့ သင်္ဘောဆိပ်မှာ နေ၀င်ခါနီး နေလုံးကြီးရယ် ကျန်ခဲ့တဲ့မေမေရယ်ကို ကျနော်မခံစားနိုင်ဘူး ကျနော်ငိုတာပဲတတ်နိုင်ပါတယ်.မေမေခွဲစိတ်ပြီး
သက်သာလာ နောက်တော့ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာနိုင်အောင် စုစုပေါင်း ဆေးရုံမှာ(၃)လလောက်နေလိုက်ရလို့ မေမေနဲ့ပထမဆုံးခွဲနေ
လိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကို ကျနော်မရချင်ပဲရခဲ့ရပါတယ် ညီမလေးနဲ့လည်းခွဲနေရတယ် ဖေဖေကတော့ခွဲနေကျဆိုတော့ ဖေဖေမရှိလည်း
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 5:24 PM , Links to this post ,0comments
ကိုချစ်ဖေလည်းဗျာ.ရေးစရာမှတ်တမ်းကြီးလည်းရှိရော ရေးချင်နေလိုက်တာ တောင်တောင်အီအီပေါ့
တောအကြောင်းတောင်အကြောင်းပေါ့.ဟဲ.အချစ်အကြောင်းအညစ်အကြောင်းပေါ့ အစုံအစုံ မသောင်း
ညွန့်ကိုလွမ်းကြောင်းပေါ့.ဒီရက်ထဲဆေးလေးသောက် စားချင်တဲ့ ဓါတ်စာလေးစားအေးအေးလူလူနေရ
တာလည်း အကြောင်းတကြောင်းပေါ့ဗျာ.ကိုချစ်ဖေဆေးရုံကဆင်းလာတာ မကြာသေးဘူးလေ (ဆေး
ကိုချစ်ဖေဗျာ သူ့ရွာလေးကနေ အခြားအဝေးကြီးနိုင်ငံတခုကို လမ်းမှားပြီးရောက်လာလာခါစ
တုန်းကပေါ့ဗျာ.(ကိုချစ်ဖေက ခြေရှည်တယ်လေဗျာ ကိုးကျင်းကိုးကျင်းလျှောက်သွားနေခဲ့တာဆိုတော့)
ထားပါတော့ဗျာ ကိုချစ်ဖေရောက်တော့ သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း နွေနှောင်းရာသီ နည်းနည်းစအေးလာတဲ့
အချိန်ဗျာ သစ်ပင်တွေကလည်းအေးလာတော့ အရွက်တွေကြွေကာနီးကာလပေါ့ သစ်ပင်ပေါ်မှာ အ
ကိုချစ်ဖေလည်း တခါမှမရောက်ဖူးတာဗျာ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာပဲမြင်ခဲ့ဘူးတာ ဆိုတော့မြင်မြင်သ
မျှသဘောကျနေတာပေါ့ဗျာ.သူငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောကြတယ် ဒီရာသီကလှတယ်ပေါ့ နောက်စ
နိုးကျတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ နှင်းတွေကဖွေးနေတာတဲ့ အော်နှင်းခဲလေးတွေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေ တယောက်
နဲ့တယောက်ပစ်ပေါက်ဆော့ကစားရင် ပျော်စရာပဲပေါ့.ကိုချစ်ဖေအဲ့ဒီကိုရောက်တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်
လောက်နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ ကိုချစ်ဖေက အဲ့လိုနှင်းတောထဲမှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားရတော့မဲ့အ
ရွယ်မှမဟုတ်တော့တာလေ.ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဗျာ ဆော့တော့ဆော့ချင်သေးတာပေါ့ မသောင်း
ညွန့်ကို မသောင်းညွန့်ကို သတိမရပဲနေမလားဗျာ ရှေ့ဆုံးကသတိရတာပေါ့ နှင်းတောထဲမှာအနွေး
ထည်အထူကြီးတွေဝတ် ခေါင်းစွပ်လေးတွေနဲ့ ကုလားကားထဲကလို သီချင်းလေးဆိုပြီး ပြေးလွှား အဲ့မြန်
မာတွေလည်းပြေးတာပဲဟာ အဲ့လိုဗျာ စိတ်ကူးယဉ်ရတာပေါ့
မသောင်းညွန့်ကတော့ “တော်နော်ကျူပ်မပါဘူးဆိုပြီး နီးစပ်ရာနဲ့မဆွဲလိုက်နဲ့”တဲ့ ကိုချစ်ဖေက
လည်းပြောရတာပေါ့ အဝေးရောက်ယောက်ကျားတွေ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ “မသောင်းညွန့်ရယ် ကိုယ်က
မသောင်းညွန့်ကိုပဲ စိတ်ထဲအမြဲရှိနေတာပါ အခြားသူတွေကို လှည့်တောင်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး ကိုယ်တို့
လိုအဖိုးကြီးတွေကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး” ဘာညာပေါ့ ရှေ့ကလာတဲ့သူလေးတွေပဲကြည့်မိတာပါ တော့
ဘယ်ပြောဖြစ်မလဲဗျာ.ပြောလို့ဖြစ်မလားဗျာ မနောက်ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုပဲ ပြောကျတာပဲဟာ.
ကိုချစ်ဖေရောက်တော့ သင်္ကြန်ပြီးသွားတာမကြာသေးဘူးဗျ. ခင်ဗျားမျက်စေ့လည်သွားပြီထင်
တယ် ကိုချစ်ဖေရောက်တာက သြဂုတ်သင်္ကြန်ပြီးသွားတာက ဇူလိုင်လထဲမှာဆိုတော့သိပ်မကြာသေး
ဘူးပြောရတာ ကိုချစ်ဖေတို့ဆီမှာ ဧပြီလ သင်္ကြန်ကို အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တချိျူ့မှာပဲ သင်္ကြန်ကျကြ
တာ အဲ့ဒီမှာက ကျလိုဖြစ်တယ်လေ ကိုချစ်ဖေတို့ အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ ဧပြီဆိုနှင်းကွဲခါစပဲရှိသေးတော့
အေးတုန်းဗျ ရေပက်ကျမယ်ဆို အရိုက်ခံရမယ်..ဒီတော့ဇူလိုင်လထဲမှာ နွေရာသီမှပဲကျရတော့တယ်
နွေရာသီဆိုပေမဲ့လဲ ရန်ကုန်ဆောင်းတွင်းလောက်အေးနေသေးတာဗျ သင်္ကြန်က ကျချင်လွန်းလိုသာ
ကျနေကြရတာ တကယ်တော့အေးသေးတယ်.နေ့လည်ပိုင်းလောက်ပဲနွေးတာလေ ကလေးတွေက
တော့ပျော်ကြတာပေါ့ဗျာ ရေတွေပက် မုန့်လုံးရေပေါ်သွားစား ဈေးတန်းလေးဖက်လမ်းလျှောက်စား
အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာလုပ်ကြတာဆိုတော့ ပန်းခြံတခုခုက ခန်းမကိုငှါးပြီးလုပ်ကြတာလေ အဲ
ပျော်သလား ပျော်သလားဆိုတော့ အပျော်တ၀က် အလွမ်းတ၀က်ကြီးပါဗျာ အဲ့ဒီအချိန်မြန်မာပြည်မှာ
က မိုးတွေသည်းသည်းမဲမဲရွာတဲ့လရောက်နေပြီဗျာ.ကျနော်တို့က အလွမ်းပြေခုမှသင်္ကြန်ကျရတာ
ဘယ်လိုဘ၀မျိူးကြီးပါလိမ့်လို့ တွေးရင်းပေါ့ဗျာ.မြန်မာပြည်ကတကယ်သင်္ကြန်ရက်တွေမှာ ၀က်ဆိုက်
ပေါ်တက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး အော်ဒို့ဗမာပြည်မှာ အတော်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါလား
မိန်းကလေးတွေလည်း ယောက်ကျားလေးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေကြပြီပေါ့.အော.ကိုချစ်ဖေက
မြန်မာမှာတုန်းက ရွာမှာနေတာဆိုတော့ သတင်းစာကိုနောက်နေ့မှဖတ်ရတာလေ သတင်းစာထဲမှာ
မပါတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုမတွေ့တော့လည်း ဘယ်သိမလဲဗျာ
ဒီရောက်တော့ ဓါတ်ပုံတွေအစုံတွေ့ရတော့မှ အော်ဒီလိုပါလား ဒို့မြန်မာမှာလည်းဒီလိုတောင်
ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထိမ်းသိမ်းနေကြပီဆိုတာသိရတာ ကိုယ်ချစ်ဖေရဲ့သဘောထားအမှန်ကတော့
ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလည်းပြောင်းပြောင်းနေတာပဲ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်း
လုပ်ကြပေါ့ဗျာ.ဟဲ.ကြည့်ရတာတော့ (ကြည့်နေကျမဟုတ်တော့ မျက်စေ့လေးပဲကွက်ရှက်တာ တခု
ပဲ.ဟီး)ကောင်းပါတယ်ဗျာ အမြဲတမ်းကျပ်တည်းနေကြတော့ လွတ်လပ်လို့ရတဲ့အချိန်လေးလွတ်လပ်
ချင်ကြမှာပေါ့ ပေါက်ကွဲချင်ကြမှာပေါ့ နှမနဲ့မောင် အဖေနဲ့သမီးအတူကြည့်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆို
ပြီးတာပါဗျာ.အဲ့ဒီရက်အိမ်မှာ မြန်မာသင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေဖွင့် သင်္ကြန်မုန့်လေးတွေလုပ်စား အင်
တာနက်ကနေ တယ်လီဖုန်းထဲကနေဘ၀တူသင်္ကြန် အလွမ်းတွေကို ရင်ဖွင့်ပေါ့ဗျာ ဇူလိုင်လမှလုပ်
တဲ့ သင်္ကြန်ကျမှ ပန်းခြံထဲကငှါးထားတဲ့ ခန်းမမှာ တူးပို့သီချင်းလေးတွေနဲ့အကတိုက်ထားတဲ့ သူငယ်
ချင်းသမီးလေးတွေ တူမလေးတွေက ကကြ ကကြဆိုလည်း မြန်မာမှာလိုလူအများကြီးနဲ့ကလို့ရတာ
မဟုတ်ဘူးလေ လူကမှမရှိတာဆိုတော့ ယိမ်းဆိုပေမဲ့ သေရောကျေရော၆ ယောက်ပေါ့.ဒါတောင်
မနည်းစုထားရတာတဲ့ ကလေးတွေကလည်း အဲ့ဒီမှာမွေးတော့ ထမီဝတ်တတ်ဖို့ ပုဆိုးဝတ်တတ်ဖို့
အိမ်မှာနေရင် ဗမာလိုပြောဖို့ ဗမာစာလေ့ကျင့်ဖို့ ဗမာအစားအသောက် တွေချက်တတ်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာ
သာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတက်ဖို့ ဗမာအက ဗမာအတီးအမှုတ်တတ်ဖို့ မိဘတွေက ကျိန်းမောင်းဆူပူ
နေရတာ ကလေးတွေလည်းသနားစရာဗျာသူတို့ အဲ့လိုကတတ်တာပဲ မနည်းအံ့သြနေရတာဗျာ.
သင်ပေးတဲ့သူ သင်ပေးရတဲ့သူကလည်းဗျာ သူလည်း သိပ်အကတတ်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သူတတ်သ
လောက်သင်ပေးရတာပေါ့ ဘယ်ကလာဗျာ စနစ်ကျပါ့မလဲ ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်း မြန်မာအလွမ်းနဲ့ကြည့်
ကတဲ့သူတွေကလည်း မြန်မာလိုကတတ်အောင် မနည်းလုပ်ထားရတာဗျာအကုန်လုံးဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲ
ကျနော်လည်းနောက်တနှစ်မှ ဇူလိုင်သင်္ကြန်ကို ကျရတာ သိကြားမင်းကတော့ခဏခဏဆင်းပေးရတာပေါ့
ကိုချစ်ဖေတို့အတွက်ပါထပ်ဆင်းပေးနေရတာပေါ့သင်္ကြန်ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီဆို သီတင်းကျွတ်ပွဲ တန်ဆောင်
တိုင်ကထိန်ပွဲတွေအတွက်ပြင်ကြပေါ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲကတော့ အမြဲမဖြစ်ပါဘူး တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်ပွဲတွေ
ကတော့လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ် ပဒေသာပင်တွေကို အိုးစည်ဒိုးပတ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေသွားပို့ကြတာပေါ့ဗျာ
တခါတလေတော့လည်း လူညီရင် စတိတ်ရှိုးလေးဘာလေးလည်းသွင်းဖြစ်ကြတယ် မြန်မာတွေက
အလွန်ပျော်တတ်ကြတဲ့လူမျိူးလေဗျာ ပွဲတွေအမြဲလုပ်ချင်တာ အပြစ်လားဗျာ လုပ်နိူင်သလောက်
တော့လုပ်ကြတယ်ဗျာ(နောက်အဆင်ပြေရင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတွေ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတွေအကြောင်း
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတွေပြီးရင်တော့ အတော်အေးလာပီ သစ်ပင်တွေဆိုလည်း တပင်လုံးအ
ရွက်တွေ ကြွေစပြုလာပြီတချိူ့နှစ်တွေဆို စနိုးစကျလာပြီနိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းဆိုရင်တော့ နှင်းတွေ
ကျလာပီ ကိုချစ်ဖေလဲဗျာ နှင်းဆိုလို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ဆောင်းတွင်း ချောင်းတွင်းမြစ်တွင်းပိတ်နေ
အောင်ကျတဲ့နှင်းပဲတွေ့ဘူးတာဆိုတော့ ဖွေးနေအောင်ကျတဲ့နှင်းကိုကြည့်ချင်မိတာပေါ့ နှင်းတွေစ
ကျတဲ့နေကိုပဲ မျှော်နေမိတော့တာ နှင်းတောထဲမှာဘယ်လိုဘယ်ညာ တွေးနေမိတာ။
နှင်းတွေလဲစကျလာရော ပျော်တာပေါ့ဗျာ ကိုချစ်ဖေလည်းအနွေးထည်လေးဝတ် နှင်းလေး
ထဲလမ်းလျှောက် နှင်းကလေးတွေကျလာတာကို လက်ဖ၀ါးလေးဖြန့်ပြီးခံရင်း ဟိုဗျာ ကျနော်တို့ ဗမာ
သီချင်းလေးထဲကလို “တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းရယ် နှင်းကလေးတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား နှင်းကလေးတွေမှ ဟုတ်ပါရဲ့လားကွယ်” သီချင်းလေးညည်းရင်းပေါ့.ပျော်စရာကြည်နူးစရာပေါ့ဗျာ မသောင်းညွန့်နဲ့ကျောင်း
တုန်းက မနက်စောစော နှင်းလေးတွေကျနေတုန်း ကျောင်းကင်န်တင်းကို လက်တွဲပြီးအတူသွားခဲ့ကြ
တာတွေလဲပြန်သတိရကြည်နူးရင်းပေါ့ သစ်ပင်တွေကလည်းရောင်စုံအရွက်တွေက ကျန်နေသေးပေါ့ဗျာ
ဟဲ..နောက်ရက်နှင်းတွေကဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ကျလာရော သစ်ပင်တွေလည်းအရွက်တွေ
အကုန်ကြွေ ရိုးတန်ကျဲကျဲ ကျီးကန်းတွေကလည်းရောက်လာ ကိုချစ်ဖေလျှောက်နေကြလမ်းလေးလဲ
ရေခဲတွေဖုံးတော့ လမ်းလျှောက်ရင်မလဲအောင်ထိမ်းလျှောက်ရရောဗျာ မနက်အလုပ်သွားရင်လည်း ကား
ကို စက်ကြိုနိူးထား ကားထဲအပူပေးထား ကားမှန်တွေရေခဲနေတာကို ချမ်းချမ်းစီးစီးထခြစ်လည်းလုပ်ရရော
ကိုချစ်ဖေသူငယ်ချင်းကနောက်တယ်ဗျာ “တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းရယ် နှင်းကလေးတွေဟုတ်ပါသလား
နှင်းကလေးတွေ ဟုတ်ပါတယ်ဗျား”တဲ့ ကိုချစ်ဖေလည်းငြိမ်နေရတယ် ကိုယ်စိတ်ကူးတာက တမျိူးလေ
လမ်းမှာ ကားမတော်တဆမဖြစ်အောင် ဘုရားစာတွေရွတ်မောင်းရတာဗျာ ဘုရားတရားကိုမြဲနေတာ
ပဲလမ်းတွေကရေခဲနဲ့ချောနေတော့ တိုက်ကြတယ် လမ်းဘေးထိုးဆင်းတယ်လေ လမ်းဘေးထိုးဆင်းတဲ့
ကားကိုနောက်ကားကြီးကတက်ဖိလို့ ဆေးရုံရောက်တာသေတာတွေလည်းဖြစ်ကြတယ် မဟုတ်လား
နှင်းတွေကျလွန်းလို့ သစ်ကိုင်းတွေကျိူး ဓါတ်ကြိုးတွေပြတ် အပူပေးစနစ်တွေရပ်သွားလို့ အရေးပေါ်အ
ခြေအနေကျေညာပြီး လူတွေကိုရဲတွေက တခန်းဝင်တခန်းထွက်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လိုက်ခေါ်ပြီး
ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ခန်းမကြီးတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့် အပူပေး အစားအသောက် စောင်အနွေး
ထည်ကအစ တချိူ့နှစ်တွေမှာ အကူအညီလည်းပေးရသေးတာ ကိုချစ်ဖေ မြန်မာပြည်ကရဲတွေကို
တောင်သတိရသေး ကူညီပါရစေတွေကို ဟီး.
ကိုချစ်ဖေကတော့မသိပါဘူးဗျာ အစက“တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းရယ် နှင်းကလေးတွေမှဟုတ်ရဲ့
ကွာကွာနေတာ.ကျနော်မသောင်းညွန့်ကို ဘယ်လောက်လွမ်းနေမလဲ ဆိုတာဗျာ..ကိုချစ်ဖေတယောက်
ထဲဆိုတော့ အားငယ်တာပေါ့.မသောင်းညွန့်ကတော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဗျာ.
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 10:04 AM , Links to this post ,0comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 8:27 AM , Links to this post ,0comments
ကိုချစ်ဖေလည်း ဗိုလ်အောင်ဒင်လိုသာပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်“ဒုက္ခပါပဲ သုခရာ”လို့..ကိုချစ်ဖေက လယ်ပဲလုပ်ချင်တာဗျာ.ပင်တော့ပင်ပမ်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေနဲ့လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် အစားအစာတွေ အများကြီးသုံးဆောင်ရတယ်.ပတ်ဝန်းကျင်သေးသေးလေးမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့နေရမယ်ဗျာ.ဘ၀မှာဘာလိုသေးလို့လဲ..မသောင်းညွန့်ကလည်းခက်တယ်ဗျာ.မိဘတွေက လယ်တွေအများကြီးလယ်လုပ်သားတွေနဲ့လယ်လုပ်ပြီးကျောင်းထားလာခဲ့တာ မသောင်းညွန့်တို့မောင်နှမတွေ ဘွဲ့ရတာပဲ.အဲ့ဒီလယ်ကိုပြန်မလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ ကိုချစ်ဖေနောက်ပဲလိုက်လာချင်တယ်တဲ့ ကိုချစ်ဖေကမတတ်သာလို့သာ မသောင်းညွန့်နဲ့ လယ်တွေကို ထားခဲ့ရတာ လယ်ပဲလုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာ..ဟိုထမ်းသမားလိုပေါ့..ဆင်းရဲတဲ့ထမ်းသမားကို နတ်ကသနားတော့ လိုရာဆုတောင်းစေလို့ ပြောတဲ့အခါထမ်းသမားက ထန်းရည်များများထွက်တဲ့ ထန်းတောကြီးတခုဖန်ဆင်းပေးပါလို့ပြောသတဲ့.ကိုချစ်ဖေလဲ အဲ့ဒီထန်းသမားလိုပါပဲဗျာ.လယ်တွေကို မသောင်းညွန့်နဲ့အတူပြန်လုပ်ချင်တာပေါ့ခုတော့ ကိုချစ်ဖေလဲ နေရာမှားရောက်နေရတာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျောင်းပြေး နောက်တော့အိမ်ပြေးနောက်တော့ ၀ရမ်းပြေး နောက်တော့ ပြည်ပြေးပေါ့ဗျာ.တပြေးထဲပြေးနေရတာဗျာ ခုထိပါပဲဘ၀တွေကိုကအပြေးကျိန်စာသင့်နေတာ စုန်းကိုက်ခံရတဲ့ဘ၀တွေ ၀မ်းတော့မနည်းတော့ပါဘူးဗျာ.၀မ်းနည်းနေရင်လည်း ကိုချစ်ဖေဗုန်းဗုန်းလဲမယ် ကိုချစ်ဖေလယ်လေးကိုပဲစိတ်ကူးယဉ်ပါတယ် မသောင်းညွန့်ကတော့ သူသင်ထားတဲ့ပညာတွေကို သမျှောမယ်ဆိုရင်လည်း သမျှောမှာပေါ့ဗျာ.ကိုချစ်ဖေကတော့ သူသူငါငါလို လယ်လေးလုပ် သားသမီးတွေကျောင်းထား လယ်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ သားသမီးတယောက်တလေတော့ပါမှာပဲ အဲ့ဒီကလေးကို လယ်ပြန်လုပ်ခိုင်းပြီး ရွာမှာပဲခေါင်းချချင်တယ် အနေဆင်းရဲပေမဲ့ လတ်ဆပ်တဲ့လေလတ်ဆပ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ အတူနေချင်ပါတယ်ဗျာ.ရွာကသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေချင်တယ် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ဗျာ စိတ်ဆိုးလဲ ဟင်းတခွက် ဟင်းစားတနပ်နဲ့ကျေနပ်သွားကြတာပဲဗျ.ချော့လိုက်ရင် ဘယ်သူမှ စိတ်နာလို့ရတာမျိူးမဟုတ်ဘူးလေဗျာ.ငယ်ငယ်တုန်းက ရေးခိုးကူးလည်းအတူ ဆရာမတွေ အရိုက်ခံရလည်းအတူ လူပျိူလှည့်တော့လည်းအတူဗျာ မိန်းမခိုးတော့လည်းတပြုံကြီး သားသမီးတွေရတော့လည်း သူထိမ်းကိုယ်ထိမ်းနဲ့ ကမ္ဘာမှာအဲ့လိုမျိူး သူငယ်ချင်းတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကြီးပြင်းဖို့အခွင့်အရေးဘယ်ရပါ့မလဲဗျာ.ပျော်စရာကြီးဗျာ ခုတော့အဝေးကြီးမှာဗျာ ဖုန်းလဲဆက်လို့မရ သတင်းလေးဘာလေးပဲစောင့်နားထောင်ရတာ.ပြန်တွေ့ကြရတဲ့နေ့မှာတော့ တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးဟားကြရဦးမယ် အားလုံးအိုသွားကြပြီကိုးဗျ.မင်းကွာအရွယ်ကျလိုက်တာ ဆံပင်တွေလည်းဖြူလို့တခေါင်းလုံး ထိပ်ကလည်းပြောင်လို့ ဟာ.သွားတွေလည်းကျိူးတဲ့ကောင်ကကျိူးလို့ ဘယ်သူကတော့ဖြင့်သေပြီကွာ ဟားဟားဟား..အဲ့လိုလျှောက်ပြောနေကြမှာ သားအကြီးကောင်က မွေးတဲ့မြေးလေကွာ သမီးကလည်းမွေးပြီ စီးပွါးရေးကတော့ဒီလိုပေါ့ကွာ ခုတော့ဗျာ ကိုချစ်ဖေလည်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့စုပြီးအလွမ်းဖြေရတာပေါ့.ခုအနားမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ထောင်ကျဖက်တွေ တောထဲကအတူလာတဲ့သေဖေါ်သေဖက်တွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဆိုတော့လည်း ချစ်ကြတာပါပဲဗျာ အဲသောက်ဖေါ်သောက်ဖက်ဆိုလည်းမှန်သပေါ့.ရွာမှာလိုတော့ မီးတောက်ကောက်ညှင်းထန်းညက်စစ်စစ်မသောက်ရဘူးပေါ့ဗျာ.ကောက်ညှင်းအရက်ပူပူလေးမှုတ်သောက်ရတာပြန်သတိရနေမိတော့တယ်.ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာတယောက်(တာရာမင်းဝေ)ရေးသလိုတေလေမီးတောက်ဆောင်းဦးပေါက်အရက်တအိုးမြူခိုးဝေေ၀ညများနဲ့ကျနော်လွယ်ချင်တဲ့ ဓါးတလက်ကြောင်းလိုပေါ့ဗျာ.ကျနော်ထွန်ချင်တဲ့လယ်တွေအကြောင်းပါဗျာ..ခုတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြောသလို.ဒုက္ခပါပဲ သုခ ရာ..လို့သာပြောချင်ပါတော့တယ်ဗျာ..
Posted by ကိုချစ်ဖေ ၏ မှတ်တမ်းကြီး at 5:25 PM0comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 8:57 PM , Links to this post ,0comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 8:52 PM , Links to this post ,0comments